ပန်ဒိုရာ: Beauty of KL
Posted by pandora at 3:58 PM
လှတယ်ဗျာ... ပန်ဒိုရာ ကိုယ်တိုင်ရိုက်ထားတာတွေလား
တော်တယ်. ထပ်တင်ဦးဗျာ. ရှိသေးရင်
ပန်ဒိုရာဆိုတာ ဘာကိုဆိုလိုတာလဲ ပြောပြပါဦး..
ပန်ဒိုရာရိုက်တဲ့ ဓါတ်ပုံတွေပါ။ ပန်ဒိုရာ ဆိုတဲ့အဓိပါယ်က ဂရိဒဏ္ဍာရီထဲကယူထားတာပါ။
After I saw that pic, I think, I know who you are... :-)